सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा डा. दीक्षितको टिप्पणीः मुलुक टाँट पल्टिन्छ ....
काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारले मंगलबारबाट लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सैद्धान्तिक रुपमा ठीक भएपनि यसको दीर्घकालीन नतिजा डरलाग्दोे हुने औंल्याएका छन् ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा डा. दीक्षितले भने,‘यो कार्यक्रम लागू गर्नको लागि अबको दुई वर्षमा डेढ खर्ब रुपैयाँ जम्मा हुन्छ भनिएको छ । भ्रष्टाचार व्यप्त मुलुकमा डेढ खर्ब रुपैयाँ कसरी जम्मा हुन्छ ? त्यसमा क–कसको गिद्दे नजर लाग्ला ?’ उनले भने,‘त्यो पैसा जुन उद्देश्यले जम्मा भएको छ । त्यतापट्टि जाला कि नजाला ? भन्ने कुरा ठूलो–ठूलो प्रश्न मेरो मनमा उठेको छ ।’ नागरिक लगानी कोष भनेको यसमा सिम्पल नागरिकको पैसा परेको हो । तर, अहिले भर्खरै वाईडबडी एयर क्राफ्टको कुरा आएको छ । त्यसमा नागरिक लगानी कोषको भयंकर ठूलो पैसा परेको छ । त्यो यसरी हेर्दाखेरि डुब्दैछ ।
दीक्षितले नेपालमा जुन–जुन सरकार आएपनि गिद्धे आँखा चाहीँ त्यही लगानी कोषमा हुँदो रैछ भन्दै अघि थपे,‘अहिले हेर्नुहोस ईन्सुरेन्समा पनि त्यही छ । हजार रुपैयाँ पर्ने कुरामा दश हजारको बिल आउँछ । सबैको मिलोमतो छ ।’ त्यस्तै उनले आज नेपालका हरेक पार्टीका ट्रेड युनियन रहेको सुनाए । उनले भने,‘ट्रेड युनियन हुनुहुँदैन थियो ।’ निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम राम्रो छ र यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बोलेको सुनाउँदै उनले भने,‘उनीहरुले राम्रो भने । तर, यसको व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले आखिरमा नेपाल ४, ५ वा ६ वर्षमा टाँट पल्टिनेपनि खतरा औंल्याए । उनले भने,‘त्यो लगानी कोष छ, त्यो विल्कुलै टाँट पल्टिन्छ ।’ उनले ३४ लाख ८ हजार कर्मचारी एकैचोटी आन्दोलनमा गए भने के हुन्छ भनेर प्रश्न समेत सोधे । उनले अघि भने,‘अनि नेपाल सरकारले पैसा लिनुपर्छ । कहाँबाट ? विदेशबाट । त्यो रकम सबै सरकारले त दिँदैन् ।
कम्युनिष्ट सरकार रह्यो भने उसले कम्युनिष्ट मुलुकनै खोज्छ । अहिले कम्युनिष्ट मुलुक त चीन नै हो । चीनले लगानी गरिदिन्छ । पैसा पनि दिन्छ । तर, डर कहाँ छ भनेदेखि अहिले संसारभरि परेको छ कि चिनियाँहरुले आरामसँग पैसा हालेका छन् । तर, पैसा फर्काउन नसक्ने मुलुकहरु ‘डेब्ट–ट्रयाप’मा परेका छन् । उनीहरु ऋणको जालोमा परेका छन् ।’ श्रीलंकाजस्ता देशलेपनि चीनको पैसा तिर्न नसकेर उसको कति भू–भाग त चीनलाई ९९ वर्षलाई लिजमा दिनुपरेको दीक्षितले सुनाए ।
प्रकाशित १२ मङ्गसिर २0७५ , बुधबार | 2018-11-28 12:55:34